Izilwandle eningizimu zibaluleke kakhulu WaseRussia. Kuyinto ngokusebenzisa la manzi ezintathu - i-Black, Azov futhi iCaspian - isimo elihlobene ne-kwamanye amazwe.
Zonke izindawo zasolwandle zidlala indima ebalulekile emnothweni. Okokuqala, imisebenzi eminingi ebalulekile, isibonelo ku ezokuthutha kanye imikhakha yezimboni. Okwesibili, izilwandle bathambekele ukuheha izivakashi, okuyinto kakhulu kwandisa ukugeleza izimali endaweni yomcebo isimo.
Lezi machibi ezalandela zadlula ngokuphazima Yiqiniso zesikole elizwakalayo, ngakho kufanele alungele cwaningo. Lesi sihloko sizokusiza uthole ulwazi oluyisisekelo latawudzingeka kwakudingeka ekulungiseleleni izintshumayelo izifushaniso.
Incazelo emfishane yoLwandle Olumnyama
Sea Black olufudumele yonke imigwamanda amanzi Russian Federation. Akukhona kuncike okokuqandisa, ngakho zeqhwa ngeke ukuthole lapha. ukujula yakhe enkulu ngaso sonke isikhathi 2245 amamitha. Lokhu ulwandle eningizimu uyahluka ngokuthi awunazo isiqhingi. Inombolo amatheku, okungokwendlela kule ndawo amanzi ufinyelela kulelo yalo ephansi impela.
Ngokungafani nezinye kwezilwandle aseningizimu Russian Federation, neBlack uhlala inhlanzi kancane. Futhi kungenzeka ukuthi amanzi ayegcwele hydrogen sulphide. The main commercial kukhona mullet kanye mackerel. Futhi kungenzeka abampofu emhlabeni ukudoba obangelwa nendle.
Black Sea port ngobukhulu waseRussia Novorossiysk yidolobha elihle. Siyabonga kuye, wenza ukuthuthwa eyinhloko uwoyela Russian kwamanye amazwe.
Izici yoLwandle Olumnyama
Kuchazwe ulwandle eningizimu (bheka isithombe. Ngenhla) is Njalo sibhekana ekushintshashintsheni izinga lamanzi. Ngakho-ke akumangalisi yokuthi uthi komnikazi asendulo eziye zatholwa abavubukuli ulwandle. Baye bahlala wangcwatshwa ezansi.
Amanzi, kakhulu, sihlukile isici esithile. Iqiniso lokuthi yakhiwa izingqimba ezimbili. Lo mqeqeshi owake wapheka has a ukushuba amamitha 100, okuyinto Ilungiselelwe umoya-mpilo enhle. Futhi ungqimba aphansi iqukethe lokuhlushwa enkulu kuyi-hydrogen sulfide. Ezansi kolwandle esigodini cishe efile.
Eyesibili ulwandle aseningizimu Russian Federation - Azov. On the indawo, kuba omunye owesincane emhlabeni futhi ngesikhathi esifanayo angajulile kakhulu. Ukujula kwawo obuyisilinganiselo 14 m futhi phakathi - .. Hhayi ezingaphezu kuka-7 m amanzi ehlobo is kusifudumeza kahle, futhi izinga lokushisa ifinyelela +28 ° C. Ebusika, uLwandle Azov echayeke umnkantsha.
Azov Sea amanzi
Ngokusebenzisa emincane futhi engajulile Kerch Strait, lolu lwandle eningizimu emanzini Russian kushintshwa ne Black. Ngenxa izimo ezikahle echazwe ngasemanzini ngesikhathi esithile edlule ukujabulele Inani izinhlanzi. Ngokuyinhloko, lokhu kuhlanganisa lokhu okulandelayo: beluga Sturgeon, perch, bream, inhlanzi no carp. Ngenxa ukwehla kwamanzi endaweni (lokhu kungenxa yokuthi ukwakhiwa amadamu kanye ezingeni amanzi iconsi) echazwe ulwandle eningizimu baba anosawoti omningi kakhulu futhi ezingatheli.
Okwesithathu ulwandle aseningizimu Russian Federation iyona iCaspian. It, ngokungafani odlule ezimbili, umzimba avaliwe amanzi. Ayisebenzi, umqondo ubhekwa echibini. It has an ijamo side, welulela ukusuka enyakatho kuya eningizimu. Ubude bayo 1200 km, nobubanzi - isilinganiso angu-320.
ICaspian Sea imvelo
Lokhu ulwandle eningizimu kuyinto esishintshashintshayo ambalwa zezulu. Enyakatho - Continental, phezu eningizimu - e nakwezifudumele, maphakathi ingxenye - ngokulinganisela. Kube ngokuvamile nishaye imimoya owomile. Esikhathini nobusika lokushisa zokhahlamba kusuka -8 kuya +10 ° C, ehlobo - kusuka +24 ukuba +28 ° C. On the yingxenye Russia (e engxenyeni esenyakatho) kolwandle is phansi glaciation eqinile, ukushuba ice imayelana 2 amamitha. Ice uyaqhubeka ukuma cishe 3 izinyanga.
OLwandle iCaspian amumethe zinhlobo eziyingqayizivele izinhlanzi. I eyigugu ningi of them are herring, sardines, Sturgeon, Sturgeon ezimhlophe, roach, carp, Sturgeon, Sturgeon.
Special kungcono ulwandle eningizimu. Kuphi? Endaweni lapho kukhona uwoyela negesi Amasimu okwanele. Lokhu abaningi abawazi, yiso ngenxa leli qiniso futhi ichibi abadumile. Lezi zikhala uwoyela avulekele ukuhlala hhayi nje endaweni eseduze nomuzi, kodwa futhi ogwini. The main ezifakwa Russian zitholakala eduze imingcele yamazwe ezifana Azerbaijan Turkmenistan.
Ekushintshashintsheni izinga lamanzi kanye nemiphumela
Ngenxa njalo ezingeni amanzi iyehla iyenyuka yoLwandle iCaspian linezinkinga. Phela, ngenxa izikhukhula ezenzeka nemizana eseduze futhi umhlaba wokulima, ukubhujiswa zinsika zasolwandle, izakhiwo zezimboni kanye ne-port. Ngakho-ke, i-okudotshwa ku ngaphakathi adluliselwe kwezinye izindawo, kukhona zilungiswe njalo emadolobheni asogwini. Waba yini lihlotshaniswa iyehla iyenyuka anjalo esikhathini iCaspian? Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ibhizinisi impumuzo kanye izimo zezulu.
La Perouse Strait. La Perouse Strait lapho?
Criminal ifomu zekambiso: umqondo, izinhlobo, ukubaluleka
Izitshalo eziphumelelayo zamadoda ukukhulisa amandla
Indlela ukuhlanza Pike kusukela izikali viscera
Abadala nabasha lomshado amasiko nemikhosi